Umboniso bhanyabhanya kaJames Bond ngoku Wongeza iMfuno yezoKhenketho eJamaica e-UK
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » Umboniso bhanyabhanya kaJames Bond ngoku Wongeza iMfuno yezoKhenketho eJamaica e-UK
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Caribbean • ukonwatyiswa • Imiboniso bhanya bhanya • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlumayo zase-UK
UMlawuli wezoKhenketho, uDonovan White (2nd l) wabelana ngomzuzwana kunye nabaphathi behlabathi be-Amadeus, iSekela likaMongameli, uTom Starr (l) kunye noMlawuli, u-Alex Rayner (c); UMlawuli weNgingqi we-JTB we-UK kunye noMntla Yurophu, u-Elizabeth Fox (2nd r) kunye noDelano Seiveright, uMcebisi oMkhulu kunye neSicwangciso seSebe lezoKhenketho, kwi-World Travel Market eLondon, eNgilani, ngoLwesithathu, ngoNovemba 3.
Abaphathi abaphezulu be-Amadeus, inkampani yetekhnoloji yezokhenketho esekwe kwihlabathi laseYurophu, namhlanje baxelele amagosa aphezulu okhenketho eJamaican ukuba ukukhutshwa kwe-30 kaSeptemba bhanyabhanya kaJames Bond yamva nje, Akukho Ixesha lokufa, enemiboniso emininzi eJamaica, inceda ekuqhubeni umdla indawo yokuya eJamaica, ngakumbi eUnited Kingdom.
Abaphathi be-Amadeus baqaphele ukuba babona ukhangelo oluphezulu kakhulu kunye nomdla wokubhukisha kunye nemfuno yendawo yokuya eJamaica.
Abaphathiswa bezoKhenketho neNkcubeko kunye neJAMPRO badlale indima ephambili ekuboneleleni ngolungiselelo, unxulumano noluntu kunye nokuthengisa ifilimu yeBond yamva nje.
IJamaica likhaya lomoya likaBond, u-Ian Fleming ebhala iinoveli zikaBond endlwini yakhe, “Goldeneye.”
Akukho xesha lokufa lijongeka lilungele ukufumana i-Avengers: Ukuphela komdlalo e-UK, ithatha indawo yesihlanu kuluhlu lwee-ofisi zebhokisi ezikhuphayo ngalo lonke ixesha kwi-blockbuster ye-Marvel's superhero.
Le nkcazo inikwe nguTom Starr kunye no-Alex Rayner, uSekela Mongameli kunye noMlawuli e-Amadeus ngokulandelelanayo, kwiMarike yokuHamba yeHlabathi eLondon, eNgilani. Itekhnoloji ye-Amadeus kunye nezisombululo zisebenza njengomqolo kunye namandla kwishishini lokuhamba kwihlabathi, kubandakanya iinqwelomoya, izikhululo zeenqwelomoya, iihotele kunye noololiwe, iinjini zokukhangela, iiarhente zokuhamba kunye nemisebenzi yokhenketho. Abaphathi be-Amadeus baqaphele ukuba babona uphando oluphezulu kakhulu kunye nomdla wokubhukisha kunye nemfuno Indawo eJamaica e-United Kingdom kwaye yayalelwa kumsebenzi woMphathiswa wezoKhenketho kunye ne-arhente yayo i-Jamaica Tourist Board (JTB) kunye namaqabane abalulekileyo kwindawo yentengiso kunye nomboniso bhanyabhanya omtsha kaJames Bond.
IJamaica likhaya lomoya likaBond, u-Ian Fleming ebhala iinoveli zikaBond endlwini yakhe, “Goldeneye.” Iifilimu zeBond uGqr No kunye noLive kunye noLet Die nazo zafotwa apha. Akukho xesha lokufa, abenzi bhanyabhanya bakha indlu yomhlalaphantsi kaBond eselunxwemeni eSan San Beach ePort Antonio. Eminye imiboniso efotwe eJamaica ibandakanya ukuhlangana kwakhe nomhlobo wakhe uFelix kunye nokudibana no-007 omtsha, uNomi. IJamaica iphinda kabini kwimiboniso yangaphandle yaseCuba.
IJamaica iza kuqala ukufumana ubuncinci iinqwelomoya ezili-16 ngeveki ukusuka e-United Kingdom, ibuyisela isiqithi kwindawo emalunga ne-100 yeepesenti yezihlalo zenqwelomoya njengoko amanani okhenketho ephinda ebuyela. I-TUI, iBritish Airways kunye neVirgin Atlantic zibonelela ngokungapheliyo Iinqwelomoya phakathi kwe-UK Izixeko zaseLondon, eManchester, eBirmingham naseJamaica.
UMphathiswa wezoKhenketho u-Edmund Bartlett ukhokela iqela elikwinqanaba eliphezulu elisuka kwiSebe lezoKhenketho kunye ne-JTB kwiMarike yoKhenketho yeHlabathi, omnye wemiboniso emikhulu yorhwebo lokhenketho ehlabathini lonke. UBartlett ujoyinwe nguSihlalo we-JTB, uJohn Lynch; UMlawuli wezoKhenketho, uDonovan White; Umcebisi oMkhulu kunye neQhinga lobuchule, uMphathiswa wezoKhenketho, uDelano Seiveright; kunye noMlawuli weNgingqi we-JTB wase-UK nakuMntla Yurophu, u-Elizabeth Fox.